Uphando lokungena kwi-NHL - I-Nhl
Emva kwexesha elifinyeziweyo eliqhelekileyo elibona ukwanda kweembambano, amandla ombane ixesha elide abuyela phezulu kwiligi, kwaye iibhokisi zezohlwayo zigcwalisa okweemoto ezihlekisayo, ekugqibeleni sifikile kwincopho yekhalenda yeNHL: ukuqala kwemidlalo yokudlala . Phambi kokwehla kwepuck ngoMgqibelo, Umkhombe Iintloko zehockey zihlanganisene ukujonga kuqala abadlali abonwabe kakhulu ukubukela le midlalo yokudlala, amaqela angenakulinda ukuba abone ukuba apheliswe, kunye nokukhetha kwabo ukugoduka neNdebe yeStanley.
1. Uthini umbono wakho wobude be-tweet kwimidlalo yokudlala yeStanley Cup?
UMichael Baumann : Ndineentloni ngendlela endivuya ngayo. Le ligi iyandikhathaza kakhulu, kodwa isenokungabikho into ebhetele kwezemidlalo kunehokkey yokhuphiswano. Qho ngonyaka ndiyalibala ukuba kufanelekile ukuba ndigxeke kwaye ndiphawule nje iinyanga ezimbini.
Ilebron james buzzer ababethi
UMegan Schuster : Mna: Thetha umgca, Bart.
Kutheni ubukela ixesha lokudlala iHockey xa unokusuka nje ukhuphe i-cocaine kwaye ukhwele isithuthuthu kwihelikopta
-Jon Bois (@jon_bois) Epreli 17, 2014
UJomi Adeniran : Ifomathi entsha kodwa indebe efanayo? Ngaba akukonwabisi? Kuba ndinguye!
UCory McConnell : Siza kudinga ibhokisi enkulu.
ILogan Rhoades: Ixesha eliqhelekileyo lalifinyezwa kwaye lingaqhelekanga, kodwa lakhokelela kwezinye zehokhi ezibalaseleyo esakha sazibona. Zininzi imigca yamabali, kwaye ukuba ii-playoffs zinokugcina amandla, oku kufanelekile.
2. Ngowuphi umdlali okona ukubukela?
Baumann: Ngaba ndingaphuma nje ndize nditsho uConnor McDavid kwasekuqaleni okanye kufuneka ndenze ngathi sisigqibo esinzima kwaye ndenze kancinci?
Umbhaki: McDavid eNtshona; Taylor Hall eMpuma.
UMcConnell: Evgeni Malkin. Emva kokuchitha ixesha elininzi libekelwe ecaleni ngenxa yokulimala, uMalkin wadlala imidlalo emine ekupheleni kwexesha eliqhelekileyo kwiziphumo ezixubileyo. IiPenguins zenze kakuhle xa engekho, zagqiba isizini kuqala ngokufumana amanqaku kweqela kunye nokuvala isihloko sesahlulo sabo. Kodwa ngexa iiPens zisenokuba zifumene umjelo wazo ngaphandle kukaMalkin, udlale indima ebalulekileyo kuyo yonke imitsi yePittsburgh Cup yakutshanje kwaye kuya kufuneka enze njalo kwakhona ukuba iqela lifuna ukuyikhupha kubakaki beMpuma. Ukuba lowo uphumeleleyo kuConn Smythe angayifumana imilenze yakhe kunye nenqaku lokufumana amanqaku, lumka.
chris ryan iringer
Adeniran: UMcDavid ngoyena mdlali unomdla endakha ndambona, ke ndingathanda ukumbona ekhanyisa kwelona nqanaba likhulu kwihoki. Ndiyathemba ukuba uyakufumana ukudlala ngaphezulu kwemidlalo emine, ngokungafaniyo nohambo lwakhe lokugqibela ukuya kumdlalo wokudlala.
Schuster: Eyona mpendulo yam ibalaseleyo kukuNwaba, ngumthetho oyilwayo iDolla, inye kuphela uKirill Kaprizov. Akusiyo imfihlo ukuba i-Wild ibe lelinye lamaqela adikayo eNHL, ewe, ukusukela oko yasungulwa i-franchise ngo-2000. Kodwa enkosi ngokufaka inqaku lokungaziphathi kakuhle kwi-rookie enye yase-Russia, konke oko kutshintshile kulo nyaka. U-Kaprizov sisongelo naphi na emkhenkceni, nangaliphi na ixesha kumdlalo (ngakumbi emva kwexesha kukhuphiswano olusondeleyo). Kwaye andinakulinda ukuze ndibone ukuba angarhuqa na le franchise ikhutshiweyo kwimpumelelo ethile yasemva kwexesha lonyaka kuhambo lwakhe lokuqala lokuya kumdlalo wokudlala.
Iindlela: UAuston Matthews. Uhlala engumdlali osemthethweni, kodwa lo nyaka wahlukile. Umjikelo wakhe oshushu awupholanga kwaphela, kwaye ufumana amanqaku ngazo zonke iindlela onokucinga ngazo. Kwaye unamadevu amakhulu.
IINJONGO EZINGAMASHUMI AMANE KWIMIDLALO EYI-45
Enye yezi ncwadi zembali - ubravo, Auston Matthews ( @ AM34 )! pic.twitter.com/qOg0K2S6Id
-NHL (@NHL) Ngomhla we-7 kuMeyi 2021
3. Leliphi iqela onethemba lokuba liza kukhutshwa kwangoko?
Umbhaki: Njengelungu lexesha elide leQela lamaChaos, yonke into endiyifunayo emhlabeni kukugqibela kweLeafs-Bruins. Enye yeengozi ezininzi eziyimfuneko zokufezekisa loo njongo yi-Washington Capitals egxothwayo kumjikelo wokuqala. Uxolo, Ovi, ndiyakuthanda!
UMcConnell: Iqela laseWashington iHockey.
Iindlela: Ndoda, fuck Boston. Kwaye ePittsburgh. Njalo. Ndiyathemba ukuba bobabini baya kuba neentloni kwaye baphulukane nayo yonke imidlalo. Kwaye ukuba bayaphela badlala omnye nomnye, ndiyathemba ukuba olu luhlu luyadinisa kangangokuba ophumeleleyo atshayelwe kumjikelo olandelayo kwaye ahambe engenamanqaku kwinkqubo.
Baumann: Njengomlandeli weFlyers, ndibophelelwe ngumsebenzi kwiingcambu zeePenguins ukuba zitshayelwe. Kwaye ndiyakwenza njalo. Kodwa owu Thixo wam ungacinga ukuba iMaple Leafs, in le unyaka, kwi le ukwahlulwa, kulahlekile kumjikelo wokuqala kwakhona ? Ukuthatha kuya kuba yingozi kukhuseleko loluntu, kwaye emva koko kubangele ukuba uWilliam Nylander athengiselwe abanye abantu abaza kuthi ngokukhawuleza babhatalwe njengokuza okwesibini kukaWendel Clark. Andinakulinda.
Adeniran: Awuyi kumangaliswa yile nto ukuba ukhe wathetha nam imizuzu emihlanu, kodwa ndiyathemba ukuba iBoston Bruins iyatshayelwa kwaye iphulukane nayo yonke imidlalo ngeenjongo ezingama-45.
Schuster: Ukuba ngokupheleleyo isahlulo se-East sinokuphuma ebusweni bam, ingakulunga.
4. Uziva njani malunga nokuseta okukhethekileyo kulo nyaka?
Umbhaki: Unyaka ngamnye kufanele ukuba unje, ngokunyanisekileyo, apho iCanada iqinisekisiwe inye (1) indawo kwezine zokugqibela, KODWA KUNYE KUPHELA (1) SPOT.
Baumann: Ndonwabile malunga nokumbalwa kwematchups esinikwe yona esingakhange siyibone- Idabi laseFlorida, uthotho lokuqala lweLeafs-Habs ngaphezulu kweminyaka engama-40- kodwa ndigcinile ukuba konke oku kukunganyaniseki. ukunika amaqela abuthathaka aseCanada ithuba lokuphumelela iNdebe.
UMcConnell: Njengomlandeli weqela kwicandelo laseMpuma, iyafana kakhulu. IMpuma lelona candelo linzima kwaye la maqela kuye kwafuneka adlale kuphela kulo lonke ixesha lonyaka. Kuya kuba lula ukukhalaza, kodwa kuya kufuneka ubethe awona maqela mabalaseleyo ukuze aphumelele iNdebe kuwo nawuphi na unyaka. Umahluko omkhulu kukuba awona maqela mahle azakudlala omnye nomnye kwangoko, kungoko ndinemincili ngenxa yomlilo kwimijikelo yokuqala.
Adeniran: Ndiyi-100 yepesenti apha ngenxa yayo! Eli lixesha lokuzama izinto ezintsha kwaye wenze ezona ndawo zinomdla kakhulu kwezemidlalo ngakumbi.
Iindlela: Ngeli nqanaba, la maqela ayazana kakuhle, ke umsebenzi wasekhaya sele ugqityiwe kwaye lixesha lokudlala. Akukho zingxengxezo kwimijikelo yakuqala. Uyazi kakuhle into oyifumanayo.
ixesha eli-7 elihle
5. Esi sisithuba sakho sokuthetha ngesahlulo saseMantla (a.k.a all-Canada). Khupha kude.
Iindlela: Eli candelo akufuneki litshintshe. Ndifuna kuphela ukubona iCanada ngokuchasene neCanada. UMcDavid kufuneka adlale nala maqela kuphela. Kwaye masiphose iNyathi apho.
Umbhaki: Ikhonkco? Okungakumbi njengokuncuma ngokuzolileyo njengoko ndicinga ukuba ukunyibilika kwimithombo yeendaba kuya kwenzeka ukuba ngaba iiOilers okanye iiLeafs ziya ku-0-1 ukuqala uthotho lwazo ...
Baumann: Ngaba kwakulungile ukunika amaqela aseCanada ikhaphethi ebomvu kwinqanaba lokugqibela lomdlalo wokudlala? Ngaba bekumnandi ukubukela uMcDavid, uLeon Draisaitl, kunye noMatthews bebetha iesile elithengisa ngokungxama kwiqela lamaqhula? Ngaphezulu kunokuba ndandikhe ndacinga.
Schuster: Ngokwenene ndize kujongana nokuxhasa ubukho beli candelo, ukuba kuthathwe kuphela. Ukuba iqela laseCanada ekugqibeleni liyayiphelisa imbalela ye-Stanley Cup yelizwe engama-28 kule sizini, abantu baya kuthi kungenxa yokuba banikwe indawo kwindawo yokugqibela. Kwaye ukuba abayenzi, abantu baya kuthi banikwe indawo kwindawo yokugqibela kwaye nangoku ayikwazanga ukuyenza. Nokuba yeyiphi na indlela endiyiphumelelayo.
UMcConnell: INew York Ranger, iqela elingasentla-.500 leqela elithe tye wagxotha abaphathi bayo ababini abaphezulu Waze wahlawuliswa ikota yesigidi seedola ngenxa ye… ingxelo enemibala elandela #Williegate, iya kuba nguhayi. Imbewu e-4 kwicandelo laseMantla. Ke ngelixa kumnandi ukuba bafumana isibiyeli sabo esincinci kulo nyaka, hayi, andithathi naliphi na kula maqela aseCanada ngokungathandabuzekiyo njengabaphikisi besihloko.
UJulie purcell ongumcuphi wokwenene
Adeniran: Njengomntu ongazange aye eCanada, mayibe sisicelo sam esisemthethweni sephepha-mvume lokundwendwela: Andikaze, nangaliphi na ixesha, ndibenayo nayiphi na intiyo ngakulo naliphi na iqela elikwicandelo elisenyakatho le-NHL kwaye ndigqibe kwelokuba ndimelane nabo nabalingane bam abangavumelaniyo.
6. Ngubani ukukhetha kwakho ukugoduka neConn Smythe?
Umbhaki: Intloko yam ithi nguNathan MacKinnon. Intliziyo yam ifuna uBrad Marchand.
Baumann: Andazi ukuba lo ngunyaka apho owona manqaku aphezulu kwiintshatsheli zeNdebe egoduka neConn Smythe, okanye unyaka xa abavoti bebahle kwaye bewunika umntu okhuselayo. Ke… iMacKinnon? Xa kunokwenzeka ukuba uCale Makar angangena aze ayibe.
UMcConnell: Sekuyiminyaka esithoba okoko ipali yaphumelela iConn Smythe, eyona mbalela inde kumninimzi ofumana elo wonga. Ukuba iGolden Knights yenza owokugqibela, ndibona uMarc-Andre Fleury eyisa ekhaya.
Adeniran: UAuston Matthews uzakuhla etroneni yakhe edongeni kwaye abambe indebe yokuqala yeConn Smythe yeqela laseCanada ukusukela kuPatrick Roy kwi1993.
Ibali le-biggies ukuxelela
Iindlela: NguMcDavid. Abanye abadlali banamaxesha onyaka awona msebenzi afanelekileyo nenani elisebenza engqondweni, kodwa uMcDavid ngokungathandabuzekiyo ungaphezu kwabo bonke. Into ayenzileyo ngeli xesha ilungile.
Schuster: Njengokuba andifuni ukuba yi-MacKinnon, kuba oko kuthetha ukuba iqela lakhe lenze ngaphandle kweNtshona, ndicinga ukuba kuya kuba yi-MacKinnon.
7. Kwaye leliphi iqela eliza kuyiphumelela iNdebe?
Baumann: Udaka. Ndinokholo iisuti zikaJared Bednar; Ibutho elikhuselayo lilungile ngokwaneleyo ukuba lingarhuqa iqela elinamanqanaba atshintshayo ukuya phambili kumdlalo wokugqibela weNdebe; kwaye ii-Avs zingenayo kuphela eyona migca ilungileyo kwihockey (MacKinnon-Rantanen-Landeskog) kodwa eminye imigca emibini eyayilungile ngokusisiseko kulindelo lweenjongo kulonyaka. Ngebebeyiphumelele iNdebe kunyaka ophelileyo ukuba bebengakhange babethwe phantsi, njengegoli yabo yomtya wesibhozo. Bazokuwugqiba umsebenzi kulo nyaka.
Umbhaki: Owu hayi, ngaba olu phononongo kufuneka lube nengqondo engqinelanayo yangaphakathi? Ukuba kunjalo, ndicinga ukuba intloko yam ithi iColorado Avalanche kwaye intliziyo yam ithi iToronto Maple Leafs. xoxo, uMush
UMcConnell: Ngokwesiko leenkolelo zeHockey, andinakuze ndikhethe iqela lam, iiPeni, ukuphumelela iNdebe. Andinakuze ndicebise ukuba ngokuphuma kwindawo yokuqala kwelona candelo linzima kwiligi, besempilweni kwaye beqhayisa ngekhemistri ebengekho kwimikhankaso yabo embalwa edlulileyo, banokuthatha izinto zekhaya. Andinakuze ndibonise ukuba ukudityaniswa kwabo ubunzulu kunye nokufumana amanqaku kubenza ukuba bakulungele ngokukhethekileyo ukuthatha amaqela avela kumacandelo aseNtshona naseMantla afike agqibe iirekhodi zawo unyaka wonke ngokudlala ukhuphiswano oluphantsi. Awuyiva le nto iphuma kum.
Adeniran: Andikholelwa ukuba ndithetha lento… kodwa ndihamba neMaple Leafs. I-2021 ngunyaka u-Auston Matthews azisa iToronto kwiNdebe yeStanley yokuqala ukusukela ngo-1967, masihambe!
Iindlela: IiVenkile zeGolide zeVasgas. Kuyaphambana ukuthi kuba baseseyilungelo elitsha, kodwa lixesha labo. Eli qela alikho msinya; zomelele kakhulu. Bakhelwe ukubetha nabani na, kwaye ngulo nyaka baphakamisa iNdebe.
Ikhephu likaJon liphila okanye lifile
Elona qela libalaseleyo lebhola ekhatywayo 2018
izinto zabantu abadumileyo zityhilwe
bozo umhlekisi wgn